SBS Language | Miisaaniyada 2022-2023 oo la soo bandhigay caawa oo Talaado ah
Miisaaniyada 2022-2023 oo la soo bandhigay caawa oo Talaado ah
Qasnajiga federalka Josh Frydenberg ayaa soo bandhigay miisaaniyadiisii afraad oo loogu talo galay in culayska dhanka maciishada laga qafiifiyo qoysaska Australia.
Ujeedada ugu wayn ee lacagaha badan ee la qarash garaynayo ka hor doorashada ayaa ah in wax looga qabto qiimaha batroolka oo cirka isku shareeray iyadoo la dhimayo canshuurta dawladu saarto batroolka si qiimahu hoos ugu dhaco, canshuur dhimida ayaa dhaqan galaysa laga bilaabo caawa oo bisha Maarso tahay 29.
Dad ka badan 10 milyan oo Australian ahaa ayaa si ku meel gaar ah canshuuraha looga dhimayo. 450 doolar oo loogu talo galay dadka daqliga hoose iyo kuwa daqliga dhexe.
Qasnajiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dadka oo daawooyinka loo jabinayo, tababarka shaqo ee dhalinyarada, amniga dhanka internetka, iyo lacago kale oo lagu bixinayo tallaalka iyo sidoo kale 250 doolar oo hal mar ah oo la siinayo lix milyan oo Australian ah iyo nidaam shaqooyin loogu abuurayo dadka dalka loogu yimid.
Mr Frydenberg ayaa sheegay in miisaaniyadan ay jabtar cusub u tahay dhaqaalaha Australia oo ka soo baxaya COVID-19.
"Tani waa himiladeenii aan Australia ugu talo galnay, waana taas miisaaniyada aan caawa soo bandhignay. maciishada inaan dadka ka caawino. Qorshe dhaqaale oo waqtiga dheer shaqooyin dheeraad ah lagu abuurayo. Maalgalintii ugu badnayd ee la galinayo adeegyada asaasiga ah. Difaaca iyo amniga qaranka oo la adkeeyo," ayuu yiri Mr Frydenberg.